गणेश चतुर्थी रेसिपीहरू: १ EASY सजिलो मीठो व्यंजन जुन तपाईं घरमै बनाउन सक्नुहुनेछ - PAMPEREDPEOPLENY.COM - कुक्री
गणेश चतुर्थी रेसिपीहरू: १ Easy सजिलो मीठो व्यञ्जनहरू जुन तपाईं घरमा बनाउन सक्नुहुन्छ
घर कुकरी शाकाहारी शाकाहारी oi- स्टाफ द्वारा स्टाफ | अद्यावधिक गरिएको: बिहीबार, अगस्त २०, २०२०, १:40::40० [IST]
गणेश चतुर्थी २०२० २२ अगस्तमा पर्दछ। यस वर्ष गणेशलाई घरमा ल्याउने परिवारहरू तयारीमा व्यस्त भइसकेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ कि गणेश एक भगवान हुनुहुन्छ जसले खानलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। यसैले गणेश चतुर्थी व्यंजनहरु को एक विशेष महत्व छ। सबै भारतीय उत्सवहरू केहि वास्तविक स्वादिष्ट मीठा पकवान व्यंजनहरू बिना अपूर्ण हुन्छन्।
तर गणेश चतुर्थीका विधिहरू फरक छन्। तिनीहरू केवल हाम्रो लागि खाद्य हुन्। भगवान गणेशलाई पनि यी विशेष व्यंजनहरुमा घाँस खान मन पर्छ। त्यसकारण यी गणेश चतुर्थीका व्यंजनहरू पनि गणपति बप्पालाई प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। गणेश चतुर्थी एउटा त्योहार हो जुन मुख्यतया महाराष्ट्र र कर्नाटकमा मनाइन्छ, यी प्राय: पानाका विधिहरू यी दुई राज्यका हुन्।
१० पारंपरिक गोवंश गणेशाले आज तपाईलाई चलाउन पर्दछ!
यद्यपि केही गणेश चतुर्थीका विधिहरू सामान्य नै रहेका छन्। उदाहरण को लागी, हामी सबैलाई थाहा छ कि गणेश लाडू लाई माया गर्छन्। र ल्याडू रेसिपीहरू बढी वा कम विश्वव्यापी हुन्। गणेश चतुर्थीको लागि अर्को महत्त्वपूर्ण खाना हो मोडेक्स। तपाईंको उत्सवहरू बिना वास्तवमा अपूर्ण हुनेछ मोडक व्यंजनहरु । हामी यहाँ चारवटा विभिन्न प्रकारका मोडल रेसिपीहरू तपाईलाई दिन्छौं। प्रभुलाई घर ल्याउनु भन्दा पहिले के तपाईं जान्नुहुन्छ?
यस वर्ष गणेश चतुर्थीका लागि केही क्विंटेसनल रेसिपीहरू छन् जुन तपाईंले यस बर्षे प्रयास गर्नुभयो।
पुलियोगारे दक्षिण भारतको एक धेरै प्रख्यात शाकाहारी नुस्खा हो। यो केवल मुख्य पकवानको रूपमा मात्र राहत दिईंदैन, तर दक्षिण-भारतीय मन्दिरहरूमा 'प्रसाद' को रूपमा पनि प्रस्तुत गरिन्छ। पुलियोगारे भनेको स्वादिलो ​​चामल केही चाखलाग्दो र सुगन्धित मसालाबाट पकाइन्छ।
फेन्सी ड्रेस प्रतिस्पर्धाको लागि नयाँ विचारहरू
मोतीचुर लाडू भगवान गणेशको मनपर्ने खाना मानिन्छ। यस बुन्डीको लडु गणेश आरतीमा पनि उल्लेख छ 'लडू का भोग लागे, सन्त करेन सेवा'।
जान्नुहोस् कि कसरी स्वादिष्ट मोदकहरू बनाउने, यस मौसममा महाराष्ट्र मीठो रमाइलो? मोदकहरू सबै शुभ अवसरहरूमा तयार पार्न सकिन्छ किनकि यो भगवान गणेशको मनपर्ने हो।
जब मिठोको कुरा आउँछ, हामी सबैलाई थाहा छ भगवान गणेशलाई मोदक र लडूहरू मन पर्छ। खानाको बारेमा के हुन्छ? तपाईं खाना प्लेटमा मिठो सेवा दिन सक्नुहुन्न। यहाँ परम्परागत मसला भाट रेसिपी छ जुन तपाईले गणेश चतुर्थी मनाउन सामान्य महाराष्ट्रीयन शैलीमा तयार गर्न सक्नुहुन्छ।
पूरन पोली महाराष्ट्रमा बनाइएको स्वादिष्ट मिठाई हो। यो सबै विशेष अवसरहरूमा बनाईएको हो। यो स्वीट डिश रेसिपी मूलत: मिठो गुड़ भरिएको पराठे हो।
घी चामल एक स्वादिष्ट पदार्थ हो जुन दक्षिणी भारतमा धेरै लोकप्रिय छ। घी चावलको नुस्खा पुलाव रेसिपीसँग मिल्दोजुल्दो छ तर केहि चिह्नित भिन्नताहरू छन्। घी चावल र पुलाओ बीचको मुख्य भिन्नता भनेको यसमा थपिएको घी वा स्पष्ट मक्खनको मात्रा हो।
चुर्मा जमिन गहुँ हो जुन घी र चिनी वा गुड़ले तयार पारिन्छ। तपाईं धेरै सजिलैसँग धेरै सामग्रीहरू प्रयोग गर्न चुरमा लाडू रेसिपी सजिलैसँग प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ। यो वास्तवमै एक राजस्थानी रेसिपी हो जुन सबै अवसरहरूमा अत्यधिक स्वादिष्ट हुन्छ।
मोदकहरू प्रभुको मनपर्ने मीठो पकवान हो र यो दुई तरिकाले बनाउन सकिन्छ। यसलाई बनाउने एउटा तरिका बाफ गरेर र अर्को फ्राई। द्वारा हो। फ्राइड मोडहरू लामो स्टीम्ड भन्दा लामो संरक्षण गर्न सकिन्छ।
कसरी बियर पेट बाट छुटकारा पाउने
मराठीमा आमती भन्नाले मसलादार दाल र भातको अर्थ चामल हो। यो स्वादिष्ट दाल गोडा मसाला भनेर चिनिने मसलाको विशेष मिश्रणले तयार पारिएको हो। यो दाल को नुस्खा बनाउनको लागि प्रयोग गरिने सबै भन्दा महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो।
चन्ना उसल एक लोकप्रिय महाराष्ट्रीयन स्नैक्स रेसिपी हो। गणेश चतुर्थीको लागि यसको कुनै खास महत्त्व छैन। तर तपाइँ यसलाई कुनै पनि परिवारको भेलाको लागि बनाउन सक्नुहुन्छ जब बच्चाहरूले मन पराउँछन्।
बिसी बेल भात
बिसी बेले भानाथ कर्नाटकको विशेषता हो। यो मूल रूपमा धेरै प्रकारका तरकारी र मसलाको साथ तयार पारिएको चामलको प्रकार हो। बिसि बेले भाथ गणेश चतुर्थी सहित सबै शुभ अवसरहरूमा तयार पारिन्छ।
मुम्बईमा सताउने ठाउँहरू हिन्दीमा
बदाम लडू बदाम र काजू जस्ता ग्रेट नटहरू द्वारा तैयार गरिन्छ। यो शाब्दिक घीमा टिपिरहेको छ र भगवान गणेशले यसलाई प्रेम गर्नुहुन्छ।
तपाई केसरी मोडक दुई तरीकाले बनाउन सक्नुहुन्छ। एउटा मोडक रेसिपीमा हामी नरिवल भर्न प्रयोग गर्न सक्दछौं र अर्कोमा हामीले प्रयोग नगर्न सक्छौं। तर एक मीठो नरिवल भर्नाले केसरी मोडकलाई अझ बढी स्वादिष्ट बनाउँदछ।
यो एक धेरै सरल र सजिलो नुस्खा हो। बिहानको खाजामा थालिपीठ हुनुको अर्को थप फाइदा पनि यो हो कि यसले कम तेल खान्छ। यो ती दुर्लभ उत्सव व्यंजनहरु मध्ये एक हो जुन स्वस्थ छन्।
मुंग दाल मोडक
यस गणेश चतुर्थीलाई अझ विशेष बनाउनको लागि, यो भारतीय मिठो बनाउने विधि मुंग दाल प्रयोग गरेर बनाउनुहोस्। यो तपाईंले बनाउनु भएको सामान्य मोडकबाट स्वागत परिवर्तन हुनेछ र गणपति बप्पा तपाईंको रचनात्मकतासँग खुशी हुनेछन्।
Atte Ka Ladoo
गणेशलाई विभिन्न प्रकारका लड्डू मनपर्थ्यो। अटे का लाडूको यो विशेष मारवाडी रेसिपीले तपाईंको मीठो थालमा विविधता थप्न सक्छ।
बिहान कच्चा लसुन कसरी खान सकिन्छ
साडीको साथ लक्ष्मी मूर्ति कसरी सजाउने
griha pravesh Muhurat मार्च २०१ 2019 मा
कसरी waxing बिना हातबाट कपाल हटाउने
छोटो न nailsहरूको लागि नेल डिजाइनहरू
कसरी प्राकृतिक सीधा कपाल बनाउन